Moe Kai: စာမေးပွဲများ
ငယ်စဉ် ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ ကျက်လိုက်ရတဲ့ စာတွေ၊ စာမေးပွဲမှာ ကောင်းကောင်း ဖြေနိုင်ဖို.အတွက်လေ။ ပထမ အစမ်းစာမေးပွဲ၊ ဒုတိထ အစမ်း၊ နောက်ဆုံး စာမေးပွဲကြီး။ ဒီလိုနဲ. ကျောင်းပြီးလို. တက္ကသိုလ်တက်ရင်တော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ တွေ.ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေအတိုင်း ပျော်ပြစ်လိုက်ဦးမယ် တွေးခဲ့တာ။
တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လား။ မျက်စိလည်ပြီး ဆေးကျောင်းရောက်သွားတာ ဆိုတော့၊ ကျက်ပြန်ဦးဟဲ့ စာတွေ ဒီကျူတိုရီယယ် မပြီးသေး နောက်တခုက မျက်စောင်းထိုးနေပြန်ပြီ။ ဖြေလိုက်ရတဲ့ စာမေးပွဲ ကျက်လိုက်မှတ်လိုက်ရတဲ့ စာတွေဆိုတာ။ တခါတလေ အံ့တောင်သြတယ်။ ငါ့ဦးဏှောက် သေးသေးလေးက ဒါတွေ အကုန် မှတ်နိုင်သလားဆိုပြီးတော့။
ဒီလိုနဲ. အားခဲပြီး ကျက်ရ ဖတ်ရ။ သူငယ်ချင်း အပျော်အပါး ဆွေမျိုးတွေ အကြောင်းဆိုတာလဲ သိပ်မတွေးနဲ. မပျော်နိုင်ခဲ့။ ဒီလိုနဲ. ယက်ကန် ယက်ကန် ဆရာဝန် ဖြစ်ခဲ့ပေါ့။ ဒီဘဝတော့ ဘာစာမှ မကျက်တော့၊ အေးဆေး အိပ်ချင်တိုင်းအိပ် နားချင်တိုင်း နားပြစ်တော့မယ် တွေးမိတာ။
ဒါပေနဲ. ဘယ်ဟုတ်ပါ့။ နိုင်ဂံဂျားသွားဖို. စာစ ဖတ်ရပြန်ရော။ စာမေးပွဲ တွေ အထပ်ထပ် ဖြေ။ နိုင်ဂံဂျား မှာ အလုပ်တွေ စ၊ အေးဆေးဖြစ်ပလား တွေးမိတယ် နေဦး နေဦး။ အားတင်းပြီး နောက်ဆုံး စာမေးပွဲလေး တခုတော့ ဖြေဦ။ တွေးခဲ့တဲ့ Physician ကြီး ဖြစ်အောင် နောက်ဆုံး စာမေးပွဲလေးတခု MRCP လေးရအောင်း အားခဲ ကြိုးစားလိုက်ဦးပေါ့။
ဒီလိုနဲ. MRCP ပြီးလို. နာမလား အောက်မေ့ပါတယ်။ အားကစား နဲ.ပက်သက်တဲ့ ဆေးပညာ လုပ်မိတော့ ဒါနဲ. ပက်သက်ပြီး စာမေးပွဲတွေ ထပ်ဖြေရဦးမယ်တဲ။ ဒီလိုနဲ. စာတွေပြန်ကျက်။ အိမ်က ယောက်ျားကို အထပ်ထပ် တောင်းပန်၊ သူကိုပဲ လူနာလုပ်ပြီး အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ရင်းနဲ. အောင်သွားပြန်ပြီ စာမေးပွဲတွေဆိုတာ။ တော်ပြီ တော်ပြီ။ ဒီ တသက် စာမေးပွဲဆိုတာ အသံတောင် မကြားချင်တော့ဘူး။ အခုတော့ အပြတ် အသပ် နှပ်ပြီလို.ထင်တာ။
ဖြေရမယ့် စာမေးပွဲတွေတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စာတွေကတော့ ဖတ်ရ ကျက်ရ ပြင်ရ ဆင်ရတုန်း။ ရေးရတဲ့ စာစောင် တွေ Assessment နဲ. appraisals တွေဆိုတာ။ စနေ တနင်္ဂနွေ နားရက်ကလေးတောင် ဖတ်ရမယ့် စာ မဖတ်ဖြစ်ရင် ငယ်က အတိုင်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေက များရတုန်း။ တခါကဆို အိပ်မက်တောင် မက်တယ်။ စာတွေ မပြီးလို. ဒုက္ခရောက်ပါပြီ ဆိုပြီး။
ကဲ ... လုပ်ချင်ဦးဟဲ့ ဆရာဝန်။